A emerụ kaadị ebe nchekwa bụ onye na-akpata na adịghị ekwe ka na-agụ ma ọ bụ dee data na na na nchekwa. Tumadi na-akpata na-metụtara mmadụ njehie na iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu mgbe chere ihu kwesịrị ekwesị na-akpata nke ire ure ga-agụ ma na-aghọta na-arụpụta ihe kasị mma.
E nwere ọtụtụ iri puku ndị na-akpata nke na-eduga doro nke na maka otu ihe ahụ ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị emenye ụjọ mbipụta niile mgbe ọ na-abịa na kaadị ebe nchekwa kpọmkwem. Kasị nkịtị na Ugboro ihe nile na-mere site ọrụ njehie na-eji kaadị na nke kacha mma n'ụzọ. Otú ọ dị n'ebe nwere ike ịbụ ọzọ na-akpata nakwa na ụfọdụ n'ime ha e depụtara ka n'okpuru nke mere na onye ọrụ nwere ike inwe a doo anya nke ndapụta na pụrụ iduga emerụ storages na ihe iseokwu na-metụtara ha:
1. Mgbe a abụọ na afanyere kaadị nchekwa n'ime agụ enweghị wepụ onye mbụ ọ bụghị nanị na-emerụ kaadị kamakwa jide n'aka na data ọnwụ etịbe.
2. Mgbe ngwaọrụ batrị bụ ihe ga-esi drained ọ na-gwara ghara iji ya na dị ka data ọnwụ nwere ike ime na-enweghị onyinyo nke obi abụọ.
3. Mgbe kaadị jupụtara ọ na-gwara nyefee ọdịnaya a ala nchekwa nke mere na okwu a bụ nke mgbe chere ihu na nke a na onye ọrụ mgbe ọkọkpọhi a zuru kaadị ebe nchekwa emerụ na otutu nke data n'ime.
4. The kaadị ebe nchekwa na-eji na-enweghị formatting bụkwa otu n'ime ndị isi na-akpata nke data ọnwụ na nke a.
5. The kaadị ebe nchekwa ekwesịghị iwere na etinyere adọ dị ka ọ na-akpata data ọnwụ na-aga n'ihu ikpughe na gburugburu ebe obibi nwekwara ike ime ka nchekwa na-adịgide adịgide gbanyụọ.
6. The batrị ga-n'ụzọ zuru ezu ebubo n'ihu data na-agafere ma ọ bụ site na kaadị ebe nchekwa dị ka ala batrị jide n'aka na data ọnwụ etịbe ke ọtụtụ ndị ikpe.
Olee otú iji weghachite foto na-emerụ kaadị ebe nchekwa
Emerụ ebe nchekwa kaadị na-isi na-awa maka onye ọrụ na onye maka otu ihe ndị kasị mma omume ga-eji dị ka ihe ngwọta iji jide n'aka na nke na-egbo. Otu ugboro ọzọ ekele Wondershare maka na-emepe emepe ọkaibe omume na a maara dị ka Wondershare Photo Recovery nke na-eme n'aka na foto na-natara enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe software ọrụ nkwado dị ka mma. Usoro ihe omume bụghị nanị na-akwado nile di iche iche nke foto faịlụ ma ọ na-eme ka ndị niile ese foto na-akwado. E abụghị otu emeputa igwefoto nke na-adịghị akwado site na usoro ihe omume nke na-egosi ya àgwà na klas. Ngwaahịa na-abịa na a 30 ụbọchị ego azụ nkwa na ọ bụ obi ike nke na emeputa nke gosiri na nke a. Wondershare Photo Recovery Bụ a ga-enwe n'ihi na ndị niile ndị ọrụ ugboro ugboro hapụ ha photos ruru ọjọọ kaadị na riri.
The yiri usoro iji Wondershare Photo Recovery e kwuru ka ndị a:
1. Onye ọrụ kwesịrị ileta URL http://www.wondershare.com/data-recovery/photo-recovery-guide.html iji jide n'aka na ihe omume ahụ ebudatara na ulo oru ozugbo ọ e arụnyere:
2. Ozugbo mmalite button a pịrị onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na peeji na-esonụ mbanye họrọ a ga-scanned maka foto nlaghachie:
3. Ozugbo mbanye na-ahọrọ onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na iṅomi button na-enwe na ndị niile Natara photos na-ahụ gosiri mgbe Doppler e dechara.
4. The onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na photos ndị a ga-natara na-pịrị ma ọ bụ na-enyocha ma na-agbake button na-kụrụ mezue usoro na zuru.
Akwado Image faịlụ formats
Esonụ bụ ihe ndị formats na-akwado site na Wondershare Photo Recovery:
Olee otú naghachi data si a emerụ kaadị ebe nchekwa
Emerụ ebe nchekwa kaadị nwere ike mere site ọtụtụ ihe na maka otu ihe dị mkpa nke na oge awa bụ iji jide n'aka na ihe kasị mma software bụ n'ebe na-akwado ọrụ na ike ugboro. Wondershare Data Recovery Bụ otu ndị dị otú ahụ omume nke na-eme n'aka na onye ọrụ na-akawanye data natara na mgbe odụk nsogbu. Ihe omume ahụ bụ otu nke kasị mma dị ka ihe niile faịlụ usoro na-na-akwado site na ya na nke kacha mma n'ụzọ na maka otu ihe ahụ ọ na-ukwuu tụrụ aro. The reviews nke ọrụ na ndị ahịa nke Wondershare Data Recovery bụ ukwuu nti na ọ na-abịa na a ikpe version. N'ọnwụnwa a version na-eme ka n'aka na ịzụta mkpebi nke onye ọrụ na-impacted na otu onye ọrụ na-akawanye ka anya egwu atụmatụ zuo na-maa mere. Wondershare Data Recovery Bụ a ijuanya na a ga-arụnyere tufuo nkịtị data mgbake mbipụta ozugbo.
Na-esonụ bụ usoro na ga-agbasoriri iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na mmekọrita a usoro
1. The URL na-ịchọgharịrị bụ http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html iji jide n'aka na onye ọrụ na-akawanye usoro ihe omume ebudatara, arụnyere na ulo oru:
2. The ụdị faịlụ na a ga-natara bụ mgbe ahụ na-ahọrọ ma ọ bụ na-ahụ kwuru na ọ bụrụ na faịlụ ụdị na-adịghị enen mgbe ahụ All File iche ga-ahọrọ:
3. The ebe ebe faịlụ ọnwụ mere bụ mgbe ahụ na-kpọmkwem:
4. Ozugbo usoro completes niile Natara faịlụ a ga-emere onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị mkpa kasị na-enyocha na naghachi bọtịnụ na ala nri akuku a na-ahụ enwe na-akwụsị ndị usoro ad naghachi niile faịlụ:
Atụmatụ na ịkpụ ebe nchekwa kaadị na-adịghị arụ ọrụ
Ndị na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime Atụmatụ na ga-ekwe ka onye ọrụ ịnọgide na-enwe ma na-na kaadị na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ha anọwo na nke iji:
1. The kaadị mgbe niile kwesịrị-Ị n'ime ngwaọrụ nke na ọ na-eji na ekwesịghị-Ị na-eji a na kọmputa.
2. The kaadị ga-etinyere n'ime elu Ịrụ kaadị agụ dị ka mgbe ụfọdụ ndị na-agụ akwụkwọ substandard-eme nke na nke a.
3. The wupu mode foto kwesịrị mere naanị na oké ikpe na ọ ga-ekwe onye ọrụ iji nweta ọzọ ohere nke mere na kaadị ọrụ.
4. The kaadị na juputara ekwesịghị-eji na-tinye na ihichapụ oyiyi kama data ga-agafere mbụ iji nke kpebiri.
> Resource> Kaadị ebe nchekwa> ụzọ naghachi data si a emerụ kaadị ebe nchekwa